Nezvedu - Liaocheng Xinrun Kunze Uye Export Co, Ltd.
Mota Scissor Jack
Hydraulic Bhodhoro Jack
Hydraulic Simba Chiteshi
Rori akamedura Lining
Yakagadzwa ndeye1998, Shandong Wei Run Industrial Kugadzira Co, Ltd. Inowanikwa muLiaocheng Economic Development Zone, Shandong Province, inovhara nzvimbo ye68956 mativi emamita uye nzvimbo yekuvakira 39860 mativi emamita. Kune vashandi makumi matatu nemaviri, kusanganisira vanopfuura makumi mashanu nevashanu vehunyanzvi nevashandi vehunyanzvi. Hupfumi hwese ihu hunosvika mamirioni makumi masere nematatu uye iyo yegore yekutengesa mari iri pamamirioni mazana maviri emadhora.
Yedu hydraulic cylinder inonyanyo shandiswa ku loader, mudhiraivha loader, kusimudza chikuva, marara marori, marara marori, tirera, mucheki, uye mazhinji michina yekuvaka. Inogona kuita sekuda kwako uye kudhirowa.Bvuma OEM neODM.
Kambani yedu inyanzvi yekugadzira uye kunze kwenyika ine chekuita nedhizaini, kuvandudza uye kugadzirwa kweteresikopiki uye hydraulic humburumbira. Zvivakwa zvedu zvakashongedzerwa uye kugona kwekunaka kwemhando yepamusoro pamatanho ese ekugadzira zvinotigonesa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi.
Zvigadzirwa zvedu zvinobva pakurima kusvika kumotokari uye neindasitiri yega yega, zvigadzirwa zvakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevatengi. OEM neODM zvinogamuchirwa. Iyo yekugadzira tambo inovandudzwa nekuti isu tinonzwisisa kudiwa kwehunyanzvi kuita uye kusimba.
isu tiri vatengesi vakuru vezvipfuyo zvemagetsi ekugadzira mabhizinesi akadai seChina Zhongqi, Shanxi Zhongqi, FAW, Hongta, Chongqing Changan, nezvimwe. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuUSA, Russia, Poland, Vietnam, Italy, Ukraine, Romania, Australia, Canada, South Korea, Malaysia nedzimwe nyika nematunhu. uye inogamuchirwa zvakawandisa zvemhando yepamusoro.uye kuvimbika. Iyo kambani yakagadza yakakwana mushandisi sevhisi system, ichipa kugutsikana uye munguva pre-kutengesa, kutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi. Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. inotarisira nemwoyo wose kubatana maoko newe, uye kufambira mberi pamwe chete kubatsirana uye zvakajairika budiriro!
Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu kana uchida kukurukura yetsika odha, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Tiri kutarisira kuumba hukama hwebhizinesi hwakabudirira nevatengi vatsva pasirese munguva pfupi iri kutevera.